Mankanesa any Erin Hills Golf Course, Toeram-piofanana US
Mankanesa any Erin Hills Golf Course
Fampidirana ny Golf Course Erin Hills
Mpandeha an-tongotra eny an-dàlam-pandrosoana eny an-dalamby eny an-tananan'i Erin Hills Courtesy of Erin Hills
Erin Hills dia kianja golf izay natsangana manokana tamin'ny fampiantranoana US Open an-tsaina, ary tamin'ny taona 2017, 11 taona monja taorian'ny nanokafany tamin'ny 2006, dia tontosa io tanjona io.
Ny toeram-ponenana Wisconsin dia naorina amin'ny tontolon'ny rano iray, mirongatra fiakarana an-jaridaina an'arivony taona lasa izay, rehefa niakatra ny haavony teo an-tampon'ilay tany ho avo 2500 metatra ny haavon'ilay tany (18000 taona teo ho eo lasa izay no tsy misy ranomandry) .
Erin Hills dia mipetraka ao amin'ny Kettle Moraine. " Moraine " no endri-tsoratra ara-jeografika ho an'ny tany nalaina sy nokaramain'ny glaciation; Ny "kettle" dia manondro ny fahakelezan'ny ketaly ao amin'ilay tany. Ny toeram-ponenan'ny Kettle Moraine National dia tsy lavitra loatra an'i Erin Hills.
Ny halatra teatra indrindra tadiavin'i Erin Hills ho an'ny andrana isan'andro dia mihoatra ny mihoatra ny 7 800 metatra, izany hoe miavaka ny ampiasaina mandritra ny 2017 US Open .
Fa ilay mpilalao PGA Tour, Kelly Kraft, izay nahazo ny Amateur Amerikana tao Erin Hills, dia nilaza fa tsy mitohy ny fandaharam-potoana raha mbola misy ny fehezan-teny voasoratra hoe: "Ny baolina dia afaka mihazakazaka ary mivoaka any."
Ny lalao golf dia napetraka mba hilalao mafy sy haingana. Nantsoin'i Mike Davis, official USGA, hoe, "Shinnecock Hills amin'ny steroids."
Ny Erin Hills dia tsy manana làlam-pifamoivoizana ary tsy misy karatra fiara; ny fianarana dia manome caddies (ho an'ny sarany) ho an'ireo mpilalao golf izay maniry azy ireo.
Golf Digest dia nanamarika an'i Erin Hills ny iray amin'ireo Top 50 amin'ny ankapobeny sy ny Top 10 kilasy public golf tany Etazonia.
Mandeha any Erin Hills
Ny maitso faharoa tany Erin Hills, nijery avy any aoriana. David Cannon / Getty Images
Ny kianja Golf Erin Hills dia miorina ao amin'ny tanànan'i Erin any atsimo atsinanan'i Wisconsin, 35 miles avaratrandrefan'ny Milwaukee Downtown. Erin Hills dia 115 miles avaratrandrefan'i Chicago, 70 miles atsinanan'i Madison, Wisc., Ary 45 kilaometatra atsimon'i Fon du Lac, Wisc.
Kohler, Wisc., Tranon'ny Whistling Straits , dia latsaka ny 70 kilaometatra lavitra.
Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra dia ny Jeneraly General Mitchell International Airport any Milwaukee, eo amin'ny 50 minitra eo. Chicago O'Hare dia eo amin'ny 2 ora fiara mandeha, raha tsara ny fifamoivoizana.
Adiresy: 7169 County Road O, Erin, WI 53027
Afaka milalao an'i Erin Hills ve ianao?
Ny lavaka fahefatra tany Erin Hills, 439-yard par-4. David Cannon / Getty Images
Eny! Erin Hills dia kianja public golf. Fa raha mbola misy olona afaka milalao any, dia lafo be izany.
Ny fandoavam-bola maimaim-poana dia manakaiky $ 300, miaraka amin'ny famerenana ny antsasak'io vola io. Misy ny fihenam-bidy ho an'ireo tanora mpilalao baolina kitra sy mpiasan'ny miaramila.
Aza hadinoina fa lalana fitsangatsanganana fotsiny i Erin Hills: Tsy maintsy mitondra ny kitapo golf anao ianao na manakarama iray amin'ireo caddies matihanina amin'ny diany mba hitondra ny kliobanao. Ny sandan'ny kaddy dia 55 dolara isaky ny mpilalao, ary ny tombony azon'i Erin Hills dia manomboka amin'ny $ 65 isaky ny mpilalao.
Azo atao ihany koa ny fividianana fanampiny (sara $ 100 + ary tombony). Noho izany, ao anatin'ny tarika iray izay maniry ny hanangona caddies ary hampiasa fanohanana iray, ny filalaovana an'i Erin Hills dia afaka mitentina $ 500 isaky ny mpilalao. Ampio amin'ny sakafo sy ny fisotroan-drà, mihoatra ny fonenana ... ary, tsara kokoa, ny lalao golf dia tsara indrindra ho an'ny fandaniana.
Mihidy ny riaka mandritra ny ririnina, ary ny vanim-potoana misokatra dia mihazakazaka manomboka amin'ny fiandohan'ny volana Mey ka hatramin'ny faran'ny Oktobra.
(* Misy lakolosy karavasy roa eo amin'ny toeram-ponenana amin'ny fampiasana mpilalao ody manokana manokana; fangatahana tsy maintsy atao farafahakeliny roa herinandro mialoha ny hilalao.)
Mijanona ao na akaikin'i Erin Hills
Ny toeram-pambolena ao amin'ny 403-yard, 4-11th hole ao Erin Hill. David Cannon / Getty Images
Ny tranon'ny Erin Hills dia ahitana trano fidiovana fanampiny ho an'ny mpilalao golf izay te hijanona amin'ny lalao golf. Ny trano fidiovana 11-room dia manana efitrano roa sy tokana miaraka amin'ireo efitrano. Ireo vondrom-piarahamonina lehibe kokoa dia mety te-hijery ny trano fonenana. Dimy ireo, misy efitra efatra sy efitra fandroana efatra.
Ny tranonkalan'ny Erin Hills dia manome ny mombamomba ny famandrihana amin'ny toeram-ponenana sy ny kilalao ary ny tahan'ny gropy.
Raha ho an'ny hotely eo amin'ny faritra: Misy safidy maro, indrindra any amin'ny faritra avaratra sy andrefan'i Milwaukee. Raha tsy manana fifandraisana voafaritra izay safidinao foana ianao dia ampiasao maotera hotely tsara / maotera, na mikaroha Google ho an'ny "hotely akaikin'i Erin, Wisc." mba hahita safidy.
Indrindra fa misy hotely any amin'ireo tanàn-dehibe akaiky (20 minitra eo ho eo ao Erin Hills) ao Hartford, Delafield ary Oconomowoc.
Ny safidy fisakafoanana dia hita ao amin'ny clubhouse Erin Hills sy ao amin'ny The Irish Pub & Terrace izay manopy maso ny lava voalohany.
Ny niandohana sy ny Architects tao amin'ny Golf Course Erin Hills
Ny hazakazaka mankany amin'ny 12 maitso ao Erin Hills. David Cannon / Getty Images
Erin Hills no fototry ny fananganana trano fanangonam-bokatra Bob Lang, izay nanapa-kevitra fa hananganana kianja golf izay indray andro any dia hanokatra US Open. Izany no nataony. Rehefa manana vola be sy nofinofy ianao dia afaka manao zavatra toy izany.
Ireo ariketin'ny kianja golf tany Erin Hills dia an'i Hurdzan / Fry - Michael Hurdzan sy Dana Fry - miaraka amin'ny fanampian'ny mpitsikera mpanao gazety sy golf fantasy Ron Whitten.
Nanomboka tamin'ny 2004 ny fanorenana ny lalao golf Erin Hills ary nisokatra tamin'ny 2006 ny fianarana.
Taorian'ny fisokafana dia nisy fanovana natao tany amin'ny lavaka marobe ho setrin'ny soso-kevitra manokana avy amin'ny USGA. Ireo fiovana natao tamin'ny taona 2009-10, dia nataon'ny ekipan'ny Hurdzan / Fry.
Nolavina ny hivarotana ny vola tamin'ny taona 2009, i Lang, voatery nivarotra tamin'ny taona 2009. Ny tompon'ny orinasa vaovao Andrew Ziegler, lehiben'ny orinasam-pivarotana fampiasam-bola, dia nandidy ny politika mandeha an-tongotra nanomboka tamin'ny 2010.
Ny lavaka faha-15 ao Erin Hills dia mifarana amin'ny maitso maitso. David Cannon / Getty Images
Ireto manaraka ireto dia ho an'ny Blue tees (ny faharoa-from-the-the-rear eo amin'ny teeing grounds ) araka ny lisitra ho an'ny lalao andavanandro:
Hole 3 - Par 4 - 431 metatra
Hole 8 - Par 4 - 443 metatra
Front - Par 36 - 3,584 metatra
Hole 12 - Par 4 - 434 metatra
Hole 18 - Par 5 - 637 metatra
Back - Par 36 - 3,590 metatra
Total - Par 72 - 7,174 metatra
Ny Blue tees dia manana ny USGA Course Rating 75.0 sy ny USGA Slope Rating of 139.
Ny tsipika sy ny fanombanana ho an'ny toeran-dratsin'i Erin Hills:
Black Tees: 7.800 metatra, 77.9 isa, 145 isa
Green Tea: 6,754 metatra, 73.2 isa, 135 eo ho eo
White Tees: 6.233 metatra, 70.5 fitomboana ho an'ny lehilahy / 75.5 fiheverana ho an'ny vehivavy, 129 tohatra ho an'ny lehilahy / 131 tohatra ho an'ny vehivavy
Gold Tees: 5,082 metatra, 69.2 rating (vehivavy), 118 manidina (vehivavy)
Ankoatra izany, ny mari-pahaizana "Score Erin Hills" dia voamarika amin'ny fomba izay ahafahan'ny mpilalao milalao manga Blue / Green, na fitambarana White / Gold. Blue / Green dia nomena ho an'ny lehilahy, White / Gold ho an'ny vehivavy.
Herin Hills and Hazards
Ny maitso eo amin'ny lavaka faha-16 ao Erin Hills. David Cannon / Getty Images
Ny lalambe ao Erin Hills dia ahitra miaraka aminà fescue tsara, trondro tsy misy trondro any Wisconsin. Araka ny tranonkala Erin Hills, ny safidin'ny fescue tsara dia ny "manantitrantitra ny fizika voajanahary amin'ny tany ary manome milina matanjaka izay milalao kokoa noho ny halavany amin'ny karatra."
Ny bentgrass dia ampiasaina amin'ny fanangonana zana-kazo , izay manindrona ny 12.5 ho an'ny lalao fifaninanana. Ny lozam-pifamoivoizana dia ny fescue ary ny fototry ny teeing dia miteraka.
Misy 40 hektara fitateram-bahoakam-piaramanidina sy hôpitaly 30 hektara ao Erin Hills. Misy loza telo miseho izay miditra an-tsehatra ary 129 bunkers sand. Ny trano fisakafoanana dia fifangaroana amin'ny endrika maoderina maimaim-poana miaraka amin'ny tranombarotra mahazatra nentim-paharazana.
Tafika lehibe no nilalao tany Erin Hills
Ny 17 (maitso) voalohany any Erin Hills, miaraka amin'ny tsipika fahatelo hita aoriana. David Cannon / Getty Images
Ny 2017 US Open dia tsy ny hetsika goavana voalohany natao tao amin'ny kianja Golf Erin Hills. Ny USGA dia nilalao roa tamin'ireo tompondaka nasionaly teo aloha. Mpilalao fifaninanana am-pirahalahiana izy roa, ary samy namolavola ireo tompondaka izay nanohy nanao asa an-tsekoly.
Ireo fampisehoana sy ireo mpandresy:
2008 Links to Amateur Women's Women: Tiffany Joh
2011 Amérique du Championship: Kelly Kraft
2017 US Open: Brooks Koepka
Ary vitsy ny teboka sy tarehimarika ...
Ny maitso (aloha) ary ny 18 (maitso) ao Erin Hills. David Cannon / Getty Images
Rehefa nampiantrano ny US Open 2017 i Erin Hills, dia nanamarika ny fotoana voalohany nilalaovan'ny fifaninanana tany Wisconsin.
Erin Hills, tamin'ny taona 2017, no sehatra golf an'ny fahitalavitra fahenina mba hanolotra ny US Open. Ny olon-kafa tamin'izany dia ny Pebble Beach , Pinehurst No. 2, Bethpage Black , Torrey Pines (Atsimo) ary Chambers Bay .
Herin Hills voalohany voalohany ny USGA no nilalao roa taona monja taorian'ilay fisokafana tamin'ny 2008. Tiffany Joh no nandresy an'i Jennifer Song tamin'ny faran'ny tambajotra Amerikana Women's Amateur Public Links.
Tamin'ny 2011 Amateur Amerikana , nandritry ny fifaninanana eo amin'ny samy mpikambana ao amin'ny PGA Tour , dia nandresy an'i Patrick Cantley i Kelly Kraft noho ny fandresena.
Mankalaza ireo toerana malaza any Augusta National
US Open Golf Courses: Ireo toerana rehetra nilalao ny fifaninanana
Fiambenana amin'ny Golf Course
Ahoana ny fomba hanamboarana baolina maromaro amin'ny Golf Green
Manao fitsidihana ny rindrina Muirfield
Ny Tetezana Swilcan ao amin'ny The Old Course ao St. Andrews
Inona no mitranga raha toa ianao ka tapitra ny andronao?
10 Song Rock Songs Tsara Kokoa Noho ny Orana
Torohevitra momba ny kolontsaina Morrisville State
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fiangonana?
Ny fomba hahitanao ny seza tsara indrindra ao amin'ny teatra
Sekoly maimaim-poana amin'ny aterineto ho an'ireo mpianatra Michigan
Indiana State University GPA, SAT sy ACT Data
Ny Rite of Spring Riot tamin'ny 1913
Ny karazam-borona samihafa
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny frantsay
Mpilalao sarimihetsika afrikana-Amerikana malaza
40 Idioms teny anglisy
Ny History of the Paper Punch
Trabajo en United States - Fitsarana ara-dalàna
Lisitry ny Longboards tsara indrindra izay efa navoaka
7 Fisehoan-javatra mampihorohoro izay mety hamarana ny fiainana araka ny fahafantarantsika azy
Thomas Hooker: Mpanorina an'i Connecticut
Inona no horaisinao androany?
Ny dikan'ny tsy fisian'ny asa
Ayurveda ny fitsaboana ny Menopause - Ny fitsaboana hôpitaly voajanahary
Ny statistika US Naval Statistics Statistics
Ny Fihetsiketsehan'ny Fihetsiketsehana: 1820 - 1829
Ny biography of Venustiano Carranza
Mary Lacey Sr. sy Mary Lacey Jr.
Inona no atao hoe Hominin?
Ny fiheverana fototra ara-toekarena
Teny feno anarana sy ny dikany